Otu jikọtara Ndị Nwere Ụlọ Akwụkwọ Nnọrọ Onwe Ekwela Nkwa Ịkwado Obianọ
Otu jikọtara ndị dị iche iche nwere ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe na steeti Anambra ekwuputala hoohaa na ha kwụ aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ na osote ya bụ Dkt. Nkem Okeke n'azụ n'ịzọ ọchịchị ha nke ugboro abụọ.
Onyeisi ndị otu a na steeti ahụ bụ maazị Sunday Anekwe kwuputara nke a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ oge ha nwechaara nzukọ, ha na osote gọvanọ bụ Nkem Okeke, onye nọchitere anya gọvanọ Obianọ n'ọgbakọ ahụ. O kwuru na nkwado ahụ bụ n'ihi ihe dị iche iche ha hụgoro ọchịchị ahụ meputere na ngalaba dị iche iche na steeti ahụ, ọ kachasị na ngalaba agụmakwụkwọ, tinyere nkwado nke ọchịchị ahụ nye ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti ahụ.
Ndị otu a nọchitere anya ihe karịrị ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe otu puku na narị ise n'ọnụ ọgụgụ na steeti ahụ.